Ukuchongwa Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ➡ ➡️
Fumanisa ukuba yintoni i ukuthoba kwaye zibaluleke kangakanani elukholweni nakumKristu. Ukongeza, ukuba ingabaluleka njani ixesha lobunzima okanye ukungcwatywa kwimingcwabo yamaKristu.
1 Ukukhupha, imithandazo yoxolo nothando
1.1 Yintoni i-ejaculations?
1.2 Olu hlobo lomthandazo lunokwenziwa phi?
Ukukhupha, imithandazo yoxolo nothando
Abantu bafuna ukunxibelelana ngeendlela ezahlukeneyo, bezama ukunxibelelana kunye nabanye, nangona kunjalo, uninzi luthatha isigqibo sokuqhubeka, luzama ukwenza unxibelelwano olungaphezulu komoya. Olu nxibelelwano lomoya, ngandlela thile, luyakwazi ukugcwalisa izikhewu ezithile, okanye, ukucela uncedo kuThixo, uYesu, iNtombi Enyulu okanye abangcwele.
Ukwenza ubudlelwane nomnye umntu, kuya kufuneka unxibelelanise unxibelelwano oluya kusebenza njengebhulorho phakathi kwaba babini, ngale ndlela, unokuphinda uxolelanise isivumelwano okanye ubudlelwane phakathi kwamaqela omabini, apho kunokubakho uthando okanye imbeko. Ukukwazi ukunxibelelana nabantu akukho nzima, yonke into iquka ukuthetha, ukwakha amagama kunye nemiyalezo enokufunyanwa ngumamkeli kwaye iphendule ngendlela efanayo.
Ingxaki kukufuna ukunxibelelana noThixo okanye ukufuna ukumbuza okanye ukubulela ngayo yonke into, kuba abanye bakholelwa ukuba abanako ukunxibelelana naye, akukho ndlela yokumamela ikhulu leepesenti, nangona kunjalo, yimpazamo leyo. UThixo unxibelelana nathi ngezenzo, efuna ukuzalisekisa okanye ukunika esikudingayo kwintlalo-ntle yethu kwaye sinika umyalezo wethu ngokuthetha naye.
Indlela yokunxibelelana naye kungokuthandaza. Kukho izivakalisi ezahlukeneyo ezifuna ukuxolelanisa naye, ke kuya kufuneka wazi ukuba sisiphi isivakalisi osisebenzisayo.
Ayisiyiyo yonke into ebuzwayo, kodwa ikwaye ukuba ungadumisa okanye ubulele ngayo yonke into ekwenzele yona iNkosi, ngaloo ndlela wenza iseti yothando noxolo phakathi kwamacala omabini. UThixo ngutata wakho wokudala kwaye uhlala ekulungele, ukumamela kwaye akuxhase.
Ukuba uyalithanda inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: «Amagama omfi ». Ndiyazi ukuba ungayithanda.
NgesiLatin, ulwimi olufileyo, igama elithi "jaculari" lalisetyenziswa, ngelo xesha lalinikezela ngokubanako ukuphosa. Xa sithetha, siphosa amagama, enza izivakalisi okanye amabinzana.
Sifuna ukunxibelelana, njengoko sicacisile kwimihlathi edlulileyo, ukwenza ubudlelwane okanye ukwenza uhlobo oluthile lwebhondi, kodwa umyalezo unokwenziwa ukuze ungafuni ukunxibelelana kuphela, kodwa nokuba ukwazi ukubulela okanye ukubuza nje ukwazi ukuba noncedo oluncinci okanye ukhuseleko ngakumbi. Abantu benza ii-jaculari ezahluka-hlukeneyo kwizihlandlo ezahlukeneyo, oko kukuthi, sihlala sisazisa amagama ukuze sikwazi ukubumba ubudlelwane okanye ubudlelwane, nokuba ngumbulelo, thetha okanye ucele uncedo.
Ukhetho ziindlela zokuphosa, kodwa yintoni ephonswayo? Amabinzana kunye nezivakalisi zemigca zinikiwe, nangona kunjalo ezi zenzelwe ukuthandaza ngakumbi. Kwinkolo yobuKristu, umntu ufuna ukunxibelelana nabona bantu baphambili kuye; UThixo, uYesu, iNtombi uMariya, iingelosi kunye nabangcwele.
Ukudumisa kuqaliswa ngemithandazo emifutshane. Imithandazo emifutshane kukubulela okwenziweyo kuthi okanye ukubuza ngokukhawuleza kuThixo okanye kwiNtombikazi kaMariya ngokwakhe.
Ukuchazwa ngamabinzana okanye, ukusilela oko, izivakalisi ezifutshane ezisetyenziselwa ukubulela. Oku kusungulwa sisenzo sokukhangela ingqalelo kunye nokuzinikela, into eyimfuneko ukugcina ubudlelwane bethu neNkosi busebenza.
Irosari Iqulethe ii-ejaculations ezahlukeneyo, ezahlukileyo kwenye, kodwa kuhlala kunxibelelana nokunxibelelana. Irosari yincwadi ethi izame ukusidibanisa noYesu nembali yakhe, kodwa isebenzisa iNtombikazi ukuyizalisekisa, ke ngoko, imithandazo emifutshane emininzi yeyentombi.
Olu hlobo lomthandazo lunokwenziwa phi?
Amaxesha abaluleke kakhulu, ziziganeko ezinika intsingiselo kwizenzo. Umzuzu ngamnye ukhethekile kwaye wahlukile komnye, kuya kufuneka ufumane owona mzuzu, ovumela yonke into ukuba iqondwe kakuhle okanye isenzo amandla kuthatha ukuba iqondwe.
Ngoku, ungazi njani ukuba uthandaza nini okanye usebenzise i-Ejaculation, oko kukuthi, uyazi njani ukuba ichanekile ukwenza njalo okanye ukuba isetyenziswa kakuhle. Ewe, kuba zizivakalisi ezifutshane, injongo kukuba bangathandazwa kwaye basetyenziswe ngentliziyo yonke, ayisiyokuphinda nje oko kuthethwayo, kodwa kukuva oko kuthethwayo, ukuze ukholo kunye namagama kube kukuqhuba yovuyo kunye nonxibelelwano olusebenzayo xa ufuna ukuthetha noThixo okanye uMama wethu.
Irosari yincwadi esetyenziswa ngamaxesha ahlukeneyo okanye amasiko aqhutywa ngamarhamente kunye nabaxhasi bawo (abefundisi, oonongendi, phakathi kwabanye.) Le ncwadi incinci isetyenziswa ngaphambi kokuqala kobunzima, yiyo loo nto isisibongozo selizwi leNkosi Kwaye ke, ukusebenzisa i-ejaculation akulunganga.
Phambi kokuqala umthandazo ngobunzima, kubalulekile ukuba uzive unxibelelene neNkosi, umthandazo omfutshane unokuba yile nto iyimfuneko koku, ngenxa yokwakheka nenjongo yale mithandazo, ethi, ingamabinzana amancinci afuna ukubonakalisa nokudumisa, Unokwenza unxibelelwano olungcono kunye namandla phakathi kobaxelela kunye nabo babhekiswa kubo.
Akunyanzelekanga ukuba ube semsithweni ukuze ukwazi ukwenza imithandazo, kuba, ngokuzolileyo, iqela lakho lasekhaya okanye uwedwa kwindawo efanelekileyo, unokufunda nganye nganye. Injongo kukwazi ukunxibelelana kwaye uThixo, ekuyo yonke indawo, uvumela yonke indawo okanye imeko-bume ukuba ibe nakho ukwenza olu hlobo lonxibelelwano.
Omnye umzuzu wokungcwaba ngakumbi kunye nosizi, amangcwaba okanye ukusweleka komntu osondeleyo. Kolu hlobo lwesimo kubanjelwa i-novenaries okanye iintsuku zemithandazo, ukuze kukhokelwe kwaye kuthi ndlela-ntle emphefumlweni womntu oshiyekileyo, nangona kunjalo, phambi kokuba le nkqubo yenziwe, kulo mthandazo abantu banokuvalelisa kwaye basebenzise ukuchama.